किन तपाइँ तपाइँको लिफ्ट पिच खाच गर्नुपर्छ Martech Zone
किन तपाइँ तपाइँको लिफ्ट पिच खान्नु पर्छ
मङ्गलबार, जनवरी 3, 2017 बुधवार, जनवरी,, २०१२ Douglas Karr
घटनाहरूका लागि तयारीमा जुन हामी यस वर्ष गरिरहेका छौं, हाम्रो व्यवसाय विकास को भीपी - एक मास्टर नेटवर्कर - ह्यारिसन पेन्टर, र म हामी सबै कुरा छलफल गर्दै थिए घृणा गरिएको नेटवर्किंग घटनाहरूको बारेमा। सूचीमा शीर्ष कडा बेच्ने र लिफ्ट पिचहरू थिए। कहिलेकाँही, म यी घटनाहरूमा भाग लिन्छु, र यस्तो लाग्छ कि कसैले बजरको घण्टी बजायो र सबैजना आफ्नो कुनामा स्वि of्गबाट ​​बाहिर निस्के। तिनीहरू बोकिरहेका छन् र उपस्थितिका माध्यमबाट बुनिरहेका छन् एक अर्कालाई म्याच खोज्न पिच गरिरहेका छन्।
र यो विरलै आउँछ।
ह्यारिसनले देशको केहि सम्झनाजनक नेटवर्किworking घटनाहरू राखेका छन्। यसको सट्टामा एलिभेटर पिच, उपस्थितहरूलाई उनीहरूले के बनाउँदछ साझेदारी गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ seconds० सेकेन्डमा भयानक। जबकि त्यो एक बिट होकी लाग्न सक्छ, यसले घटनास्थलमा उपस्थितहरूलाई राख्दछ, र तिनीहरू साँच्चिकैमा गर्व गर्दै छन् कि केहि मा एक व्यक्तिगत किस्सा प्रदान मा गहिरो खन्नु पर्छ, वा ख्याल, वा के हुन तिनीहरू आकांक्षा। यसको सट्टामा पिच, यो व्यक्तिको मानवीय पक्षमा तत्काल झलक हो जो त्यहाँ उभिरहेको छ वा अपरिचितहरूको बीचमा बसिरहेको छ।
मैले भाग लिएको घटनाहरूमा, म कसको व्यवसाय कार्ड को हो भनेर सम्झन कोशिस गरेँ। मलाई याद छ प्रत्येक व्यक्तिको बारेमा एक विशेषता जान्दछु। उदाहरणको रूपमा, मैले डेभिड रोक्सलाई भेटें। डेभिड एक रक ड्रमर थिए जसले आफ्नो चर्चमा हरेक आइतबार खेल्न मन पराउँथे। त्यसबाट टाढा अति उत्तम चरित्र, डेभिड एक थियो जीवन कोच युवाहरूका लागि। धेरै समय नबित्दै मैले मेरो छोरीलाई प्रशिक्षण दिन दाऊदलाई नियुक्त गरें।
पिचहरूको साथ समस्या
त्यहाँ एलिभेटर पिचहरूसँग केहि मुख्य समस्याहरू छन्:
सम्भावना - तपाई किन यस्तो लाग्नुहुन्छ कि तपाईबाट व्यक्ति बिस्तारै टाँसिन चाहन्छ?
अज्ञानता - तपाईं कसरी ती व्यक्तिहरू तपाईं पनी भर भइरहेको समस्याहरूको बारेमा उनीहरूलाई केहि पनि जानेका बिना बुझ्ने जाँदै हुनुहुन्छ?
लक्ष्य - प्राय जसो यो नेटवर्कि attend सहभागीको होइन तपाईसँग ब्यापार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, यो उनीहरूको नेटवर्कमा एक व्यक्ति हो जुन तपाईंको सन्देशलाई वर्ड-अफ-माउथ मार्फत पठाइन्छ।
तपाइँले के साझा गर्नु पर्छ
यदि तपाईंलाई थाँहा छ कि तपाईं भन्दा त्यस व्यक्तिको सम्भावित ग्राहकहरूको अविश्वसनीय नेटवर्क छ जुन तपाईंले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईं कसरी तिनीहरूसँग फरक कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईंले ती सबैलाई पिच गर्नुहुन्न, हैन? म गर्दिन यहाँ केमा ध्यान केन्द्रित गर्ने छु यहाँ छ:
अति उत्तम - मबाट व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दै र यो सुनिश्चित गर्दै कि म उनीहरूसँग केही चीजहरू साझा गर्छु जुन उनीहरूले चाँडै बिर्सनेछैनन्। मेरो लागि, यो हुन सक्छ कि म एक अमेरिकी नौसेना अनुभवी हुँ वा दुई जनाको एकल बुबा। प्रत्येक शहरमा धेरै मार्केटरहरू छन् ... तर त्यति धेरै थिएनन् जो डेजर्ट शिल्ड र डेजर्ट स्ट्रम वेटरनहरू थिए जसले ट्याank्क ल्यान्डि Sh शिपमा जहाजमा सेवा गरेका थिए र आफैले दुई अविश्वसनीय बच्चाहरूलाई हुर्काए!
भरोसा - म यो जान्न चाहन्छु कि मबाट को मानिस दुबै नेटवर्क र ए छ विश्वस्त सल्लाहकार को यदि व्यक्तिसँग म उभिरहेको छु भने ग्राहकहरू वा साझेदारहरूको अविश्वसनीय नेटवर्क छ जुन उनीहरूलाई सल्लाह दिइरहेका छन् कि मेरो लागि उत्तम ग्राहक हो, म उनीहरूसँग व्यस्त रहनको लागि धेरै समय लगानी गर्न चाहन्छु र हामी कसरी एकको मूल्यवान हुन सक्छौं भनेर सिक्न चाहन्छौं। अर्को
सिकाउनुहोस् - मबाट व्यक्ति पिचिंग गर्नुको सट्टा, म यसको सट्टामा तिनीहरूलाई सिकाउन चाहन्छु। म तिनीहरूलाई मूल्यको प्रकारको बारेमा शिक्षा दिन चाहन्छु जुन म उनीहरूका ग्राहकहरू ल्याउन सक्छु र समस्याहरूको प्रकारहरूमा जुन हामी मद्दत गर्दछौं। म वास्तविक प्रयोग केसहरू साझा गर्न चाहन्छु जुन उनीहरूले याद राख्छन् र आफ्ना नेटवर्कमा मानिसहरूलाई भरोसा गर्छन् जुन तिनीहरू विश्वास गर्छन्।
सोध्नु - मूल्य को हुनु सम्झना? यस व्यक्तिको लागि मूल्यवान हुन मैले के हासिल गर्न सक्छु भनेर म अनुमान लगाउन चाहन्छु। र म स्पष्ट हुन चाहन्छु कि म उनीहरूको नेटवर्कमा पहुँच प्राप्त गर्न सहयोगको लागि सोध्दै छु किनकी तिनीहरू मेरो कम्पनीका उत्पादनहरू र सेवाहरूको लागि उत्तम फिट छन्।
सबै भन्दा राम्रो नेटवर्करहरू जुन मसँग काम गर्दछु एक गोप्य कुरा थाहा छ जुन धेरैलाई थाहा छैन। तिनीहरूको लक्ष्य नेटवर्कि event कार्यक्रममा व्यक्तिहरू होइनन् ... यो ती व्यक्तिहरू हुन् जुन सहभागीहरू भित्र हुन्छन् उनीहरुको विस्तारित नेटवर्क। हुनसक्छ तपाईं event० अन्य सहभागीहरूको साथ कार्यक्रममा भाग लिइरहनुभएको छ। तपाईंको सम्भावना त्यो ठाउँमा छैन, यो हजारौं सम्भावनाहरू हुन् यो ठाउँको बाहिर एक शब्द-मुख-मुख जडानमा!
लिफ्ट पिच खाल्नुहोस्।
टैग: डेभिड राउक्सखाच लिफ्ट पिचपिच खाल्नुहोस्एलिभेटर पिचह्यारिसन चित्रकारनेटवर्कनेटवर्क घटनाहरूनेटवर्किंगनेटवर्कि events घटनाहरू
Douglas Karr Tuesday, January 3, 2017 Wednesday, January 4, 2017
कसरी ध्यान दिने-लिने हेडलाइहरू लेख्ने जुन मानिसहरू मार्फत क्लिक गर्नेछन्
१ W तरिका जुन सामग्री अनलाइन मोनेटाइज गरिएको छ